Mareegaha Ugu Dhiiri Gelinta Badan 2015 Sida uu qabo Awwwards | Hal-abuurka Online
Websaydhyada Ugu Dhiirrigelinta Badan Sannadka 2015 Sida Ku Cad Awwwards
Dhowr maalmood ka hor waxaan dib u eegis yar ku sameynay isbeddellada ugu cajiibsan ee sannadkii hore ee naqshadeynta shabakadda maantana waxaan dooneynaa inaan aragno sida dhammaan sifooyinkaas loogu dabaqay goobaha shirkadaha, ururada iyo farshaxanada kala duwan ee gacanta Caww, mareeg ah oo abaal-marin bixisa xusa boggaga ugu soo jiidashada iyo dhiirigelinta badan sannad kasta. Haddii aad booqato shabakadooda waxaad ogaan doontaa tiro aad u badan oo shabakado hal abuur leh kuwaas oo kugu dhiirigelin doona marka ay timaado shaqada.
Halkan waxaa ah falanqaynta toban ka mid ah mareegaha ugu dhiirigelinta badan ee 2015 na siiyay:
Dhexdeeda waxaan ka helnaa guri dabaq ah, naqshad yar oo aad loo dheefshiido. Waa naqshad parallax ah oo shaashaddu ay u qaybsan tahay kala badh iyo taas oo asalka asalka ah uu uga jawaabayo dhaqdhaqaaqa jiirka. Waxay soo bandhigaysaa iftiin, midabyo soo jiidasho leh iyo duub qoto dheer oo muujin doona mid kasta oo ka mid ah boggaga loo qaybiyo webka. Waxa kale oo ay bixisaa suurtogalnimada in lagu dhex maro menu-ka caadiga ah haddii aan doorbidno taasna waa inaan kaliya ku dhejin karnaa badhanka aagga bidix ee sare.
Waxay soo bandhigaysaa naqshad halkaas oo joogitaanka sawirada iyo sawiradu ay qaadaan miisaan badan. Waxay bixisaa habab kala duwan oo soo bandhigid ah si ay u dhex maraan nuxurka iyo tiro badan oo ka mid ah walxaha soo bandhigay animations fudud sida calaamad muujinaysa hab togan iyo taban. Intaa waxaa dheer, farta geesiga ah ayaa la isticmaalaa oo badhamada waa la maqli karaa. Qalabka ayaa ah mid yar, avant-garde oo soo jiidasho leh.
Aad u fudud oo soo jiidasho leh. Waxay soo bandhigaysaa asalka leh midabyo fidsan iyo jilicsan halkaas oo shay isku rogmanaya la tuso marka aan ku dul sibno calaamada shaashadda. Intaa waxaa dheer, mar kasta oo aan gujino, midabka asalka iyo shayga ayaa isbeddelaya, iyaga oo u beddelaya wax aad u xiiso badan oo leh taabasho retro oo cajiib ah. Shaki la'aan khasnadaha laga keenay sideetamaadkii, khuraafaad iyo sharaf si qurux badan loo sharfay.
Soo jeedin rasmi ah laakiin isla markaa dhalin yaro ah oo ka dhigaysa isticmaalka minimalism iyo isticmaalka laba-soo-gaadhista si ay u muujiso waxa ku jira, oo sidoo kale soo bandhigaya taabasho dib-u-dhac ah. Sooyaalkeedu wuu is beddelaa mar kasta oo aan cusboonaysiinno bogga ugu weyn oo leh qaabab kala duwan, jilayaal, timo iyo walxo sida caaryada.
Tusaalaha wakaalada Epic waxaa laga yaabaa in xoogaa ka qurux badan laakiin aan ka qurux badnayn. Gudaha, animations iyo fiidyowyada ayaa loo isticmaalaa in lagu buuxiyo asalka iyo beddelka wareejinta ayaa loo isticmaalaa in lagu dhex maro waxa ku jira shabakadda. Ku dhawaad ​​​​sida haddii ay tahay buug-yaraha oo soo bandhigaya shaqadiisa ugu fiican, shaashadda waxay u qaybsantaa laba qaybood oo aad u wanaagsan.
Soo jeedinta Posterle waa mid maskaxeed aad u weyn, taas oo u adeegsata asal ahaan muuqaalo kala duwan oo la isweydaarsado mar kasta oo aan gujino badhanka bidix ee jiirkayaga isla markaana isla markaa nagu hogaaminaya qayb kasta oo ka mid ah. Inta badan booskeena waxaa lagu daray sawirro fadeexad leh oo cajiib ah: nacnac, naaso, muus, jeeriga ... Shaki la'aan mid cajiib ah oo cajiib ah, asal ah. Waa inaad aragto!
Shabakadda shirkaddan wax-soo-saarka ahi waxay soo bandhigaysaa dhammays nadiif ah oo qurux badan oo sawirka iyo muuqaalku ku badan yihiin. Kala-guurka marka laga soo wareego mid ka mid ah qayb kale ayaa ah mid aad u soo jiidasho leh oo bogga ugu muhiimsan waxaa lagu daraa isku-dhafka la safeeyey ee madow iyo caddaanka.
Shabakadda Benjamin Guedj waxa ay soo bandhigaysaa nakhshad isbarbaryaac ah oo daaha ka qaadaysa qaybaheeda oo leh midabyo, xarfo iyo sawirro isku dhafan. Naqshadeedu waa fidsan, fudud, firfircooni iyo firfircooni.
Haddii aan barbar dhigno boggaga intiisa kale ee aan soo xigannay, kani waxa laga yaabaa in uu yahay mid ka dhaqan badan. Madax ahaan waxaan helnaa fiidiyoow leh astaanta shirkadda iyo bogag toosan si aan u soo bandhigno waxa ku jira isbeddel kasta.
Daraasaddan waxaa naloo soo bandhigay jilayaal kala duwan oo ka mid ah kuwa ugu yaabka badan iyo asalka siman. Waa arrin asal ah oo xiiso leh.
Ugu dambeyntii, tusaalahan waxaan ku arki karnaa naqshad shaqeyneysa, cad oo sax ah oo noo oggolaan doonta inaan ku dhex wareegno waxa ku jira anagoo dul-rogid iyo muuqaal caajis ah leh. Qaabka oo ah ikhtiyaar aad u wanaagsan haddii aan isku dayno inaan bixinno noocyo kala duwan oo ka kooban qaab firfircoon, cad oo nadiif ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Websaydhyada Ugu Dhiirrigelinta Badan Sannadka 2015 Sida Ku Cad Awwwards
Windows-ka waxaa lagu qurxiyay baraf macmal ah baraf Windows
Wacom waxay waraaqaha Bamboo u keentaa Windows 10 oo ah barnaamij caalami ah